Uranus ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကဘာလဲ။ - Oscရာဝတီ
မေးခွန်းများနှင့်အကောင်းဆုံးအဖြေများ - ဂျူပီတာအတိုက်အခံယူရေးနပ်စ
သို့သော်နှစ်ပေါင်း ၄၀ ဖြတ်သန်းမှုသည်အလွန်ရှားပါးသည်။ တကယ်တော့ငါတို့ဘ ၀ မှာဒီလိုရှည်လျားတဲ့ဖြတ်သန်းမှုနှစ်ခုကိုတွေ့ကြုံခဲ့ဖူးတယ်။ တစ်ခုကတော့ Neptune sextile Pluto ဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့သင်မှန်းကြည့်မိတယ် Chiron ။Uranus ဆန့်ကျင်ဘက်။၂၈ 2020 ။
ရှေးအချိန်ကလူတို့သည်ညကောင်းကင်ယံကိုလေ့လာပြီးမာကျူရီ၊ ဗီးနပ်စ်၊ အင်္ဂါဂြိုဟ်၊ ဂျူပီတာနှင့် Saturn တို့၏ကမ္ဘာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်ဤအသိပညာနယ်ပယ်ထက်ကျော်လွန်သောနောက်ကမ္ဘာတစ်ခုသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်စောင့်ဆိုင်းရင်းတောက်ပထွန်းလင်းတောက်ပနေသည်။ ယူရေးနပ်စ်သည်နက္ခတ္တဗေဒဆိုင်ရာယူနစ် ၂၀ ခန့်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာနှင့်နေအကြားအကွာအဝေးထက် ၂၀ ဆအကွာအဝေးမှနေသတ္တမမြောက်ဂြိုလ်ဖြစ်သည်။
ယူရေးနပ်စ်သည်ကမ္ဘာမြေကြီး၏ ၈၄ နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်သာကြယ်တစ်လုံးကိုလှည့်ပတ်နေသည်။ ဒီပတ်လမ်းဟာ Uranus ရာသီတစ်ခုချင်းစီကိုကြာရှည်ခံစေတယ်။ သီအိုရီအရယူရန်းနပ်စ်တွင်နေထိုင်သူသည်ရာသီဥတုလေးကြိမ်သာကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီးတစ်ခုစီမှာ ၂၁ နှစ်မျှသာဖြစ်သည်။
ယူရေးနပ်စ်တွင်နေ၏အကွာအဝေးကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်တွင်အအေးဆုံးသောအပူချိန်များရှိသည်။ ဒီအပူချိန်ဟာအနုတ် ၃၇၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိကျဆင်းနေတဲ့ဒီအပူချိန်ကိုကမ္ဘာဂြိုဟ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုကအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ ယူရေနီယမ်သည်ကမ္ဘာမြေ၏လေးမျက်နှာခန့်ကျယ်ဝန်းပြီးသံနှင့်မဂ္ဂနီစီယမ် silikat များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
ယူရေနီယမ်၏ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်သည်ကျန်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏အေးမြသောအပြာအရောင်နောက်ကွယ်မှဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်သောရေ၊ အမိုးနီးယားနှင့်မီသိန်းတို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရေခဲသမုဒ္ဒရာဖြစ်သည်။ ဤရေခဲသောဖွဲ့စည်းမှုသည်ယူရေးနပ်စ်အားအခြားဂြိုလ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အပူများစွာထုတ်လွှတ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးပြီးအပြာရောင်ကမ္ဘာကိုနေအဖွဲ့အစည်းအတွင်းအအေးဆုံးဖြစ်စေသည်။ အပူချိန်နှင့်ပတ်လမ်းအကျယ်အ ၀ န်းအပြင်ယူရေးနပ်စ်တွင်သိသိသာသာတိမ်းညွတ်မှုရှိသည်။
အခြားဂြိုလ်ခုနစ်လုံးသည်သူတို့၏ပုဆိန်များကဲ့သို့ထိပ်များကဲ့သို့လည်ပတ်နေစဉ်ယူရေးနပ်စ်သည်အီကွေတာတစ်လျှောက်လှိမ့်နေပုံရသည်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်နေနှင့်ဝေးသောနေရာမှရွေ့လျားနေသည့်ဝင်ရိုးစွန်းဒေသများနှင့်နီးကပ်စွာထောင့်မှန်စွန်းကွက်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အနိမ့်အမြင့်ကောင်းကင်ကြယ်ကိုယ်ထည်နှင့်ယူရေးနပ်စ်၏တိုက်မိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ Uranus '13 ကွင်းနှင့်လူသိများသောလပေါင်း ၂၇ ခု၏ညှိနှိုင်းမှုကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ သူတို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်များကိုအလျားလိုက်လှည့်ပတ်နေသောအခြားကမ္ဘာ၏လများနှင့်လများနှင့်မတူဘဲဥရန်နပ်စ်များသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏တိမ်းစောင်းသည့်အီကွေတာတစ်လျှောက်ဒေါင်လိုက်လမ်းကြောင်းဖြင့်ဖောက်သည်ဘီးနှင့်ဆင်တူသည်။
ယူရေးနပ်စ်နှင့်၎င်း၏ထူးခြားသောလက္ခဏာများသည်ရှေးလူတို့၏နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေသည်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်ကြယ်ဟုထင်ရသည်။ သို့သော် ၁၈ ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်ဝီလျံဟယ်ရှယ်လ်ကထိုအရာဝတ္ထုသည်ကမ္ဘာသစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်အားမည်သို့ခေါ်သင့်သည်ကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင်နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင် Johann Elert Bode ၏အကြံပြုချက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဂျူပီတာသည်နတ်ဘုရားများ၏ဖခင်ဖြစ်ပြီး Saturn သည်ဂျူပီတာ၏ဖခင်ဖြစ်သောကြောင့်ဤဂြိုဟ်သစ်သည် Caelus ၏ Saturn ၏ဖခင်ဖြစ်သင့်သည်။ သို့သော်ရှေးဟောင်းရောမဘာသာမှအမည်များကိုအသုံးပြုခြင်းထုံးတမ်းစဉ်လာအစားဘီဒေးသည် Caelus ၏ရှေးဂရိနှင့်ညီမျှသော Ouranos ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ရှေးခေတ်ဂရိကောင်းကင်ဘုရား Ouranos ကိုဥရန်နပ်စ်သို့လက်တင်ဘာသာစကားဖြင့်ခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
Theယူရေးနပ်စ်အတိုက်အခံ/ နှစ်လယ် - ဘဝအကျပ်အတည်းများသောအားဖြင့်အနည်းငယ်ကျော်ကြာမြင့်ပြီးအချို့ကိစ္စများတွင်နှစ်ခုအထိ။ သို့သော်သက်ရောက်မှုများကိုပင်ကြာကြာခံစားရနိုင်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံနှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်အဓိကပြောင်းလဲမှုကာလတစ်ခုဖြစ်သည်။
Big Fat Astro Vlog ၏ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းကိုသင်ကြည့်နေသည်။ ငါပက်ထရစ် Watson ပါ၊ နက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာတစ်ယောက်၊ ဘောင်းဘီရှည်မဝတ်ချင်လည်းပါ။ (Brakes screech၊ မှိန်ဆူညံသံ၊ စံချိန်တင်ခြစ်ရာ။ ) ယနေ့ငါအလွန်လေးနက်သောပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်၌ရောဂါကူးစက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်အသက်သုံးနှစ်ကဲ့သို့ငယ်ရွယ်သောကျွန်ုပ်တို့၏လူငယ်များကိုထိခိုက်စေသည်။ ထိုအခါငါကငါ့အိမ်သူအိမ်သားစိမ့်ဝင်ကြောင်းဝန်ခံဖို့ရှက်ကြောက်ခြင်း။ Luci: Ousside ငါ့ကိုငွေပေးပါ။
သို့ဖြစ်လျှင် ဦး ညွှတ်ရမည်လော ဂျိမ်း - * မွှေးကြိုင်တဲ့ချိုမြိန်မှု * ချစ်တယ်မဟုတ်လား။ ဆိုလိုတာကသူတို့အတူတူလုပ်ရုံပဲ၊ သူတို့ရဲ့အသံကနည်းနည်းပဲ။
နောက်ကျောအဓိကခေါင်းစဉ်။ ငါ - ငါ .... Hot Piece of As အကြောင်းပြောချင်သည်။
နက္ခတ်ဗေဒင်၏လှပသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့တဲ့လကသင်အင်တာနက်ပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီစကားစုကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့ရလိမ့်မယ်၊ ငါစကားစုကို googled၊ youtube မှာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မရှာခင်အထိကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်မှာ Dr. Seeing Phil ဆီကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်သိမှာမဟုတ်ဘူး။ စိတ်ပျက်စရာ။
ဒန်ယဲယ် - ငါ့ကိုဘယ်သူမှဖမ်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဖီးလ် - ခင်ဗျားကသိပ်ဉာဏ်ကောင်းလို့လား။ ဒန်ယဲယ် - ရယ်စရာရယ်လို့ရယ်မောနေတယ်။ ဒန်ယဲလ်ရဲ့အမေ။ ပရိသတ်အကြောင်းပြောနေတာ။
ဒန်ယဲလ်၏မိခင်။ ဒေါက်တာဖီးလ်: သင်လှည့်စားတာရယ်နေတာလား ဒန်ယဲလ် - ဟုတ်ပါတယ်။
ဒန်ယဲလ် - ဟုတ်ပါတယ်။ * ပရိသတ်ကမယုံနိုင်လောက်အောင်လက်ခုပ်တီးကြတယ်။ * ဒန်နီယယ် - အပြင်မှာငါ့ကိုငွေထုတ်ပေးပါ။
ဘယ်လို ဦး ညွှတ်ရမလဲ Dr. Phil: ဟမ်လား ဒန်ယဲလ် - ပြင်ပငွေသား၊ မင်းဘယ်လို ဦး ညွှတ်သလဲ။ ဒေါက်တာဖီးလ် - အပြင်မှာငွေထုတ်ပေးနေသလား။ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? ဒန်ယဲလ် - ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပဲ။ အပြင်မှာငါ့ကိုငွေသား၊ အဆိုပါစကားလုံးဝေါဟာရကိုဒရိုင်ဘာတွင်နာကျင်မှုမရှိသောဆယ်ကျော်သက် Danielle Brigoli ဖျော်ဖြေစဉ်ဇန်နဝါရီလတွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။
Phil ။ လူကြိုက်များသော Danielle ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂ ရက်နေ့တွင်ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ Boynton Beach တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ကံဆိုးသောအင်္ဂါဂြိုဟ် - ပလူတိုဆက်နွယ်မှုကိုသတိပြုပါ။
Sagittarius ၌တည်၏။ Gemini ရှိ Saturn မှသူမ၏ natal chart တွင်သူမရှိသည်။ ၎င်းသည်စွမ်းအားရှိပြီးမာကျောသောအင်္ဂါဂြိုဟ်ဖြစ်သည်။
ဒါဟာအတော်လေးဒေါသနဲ့တူလှပါတယ်။ ကြင်နာ၏ဒါထိန်းချုပ်မှုထဲကသူသည်တူသော။ ထင်ရှားတဲ့စိတ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဆီကနေသင်အကူအညီတောင်းပါလိမ့်မယ်။
ထိုနေ့သည်သူမအင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခဲ့ပြီးဘာလုပ်နေသနည်း။ သူမသည်စတူဒီယိုပရိသတ်တစ်ခုလုံးကို“ ယုန်များ” ဟုခေါ်ပြီးသူတို့အားလုံးကိုတိုက်ခိုက်ရန် 'သူမ၏ Ousside ကိုငွေသား၊ ဤဆောင်းပါးသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအထိပျံ့နှံ့သွားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ Meme သည်စနေနေ့ကအဘယ်နေရာတွင်ရှိသနည်း KnowYourMeme.com အရ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင်တင်ခဲ့သည်။ ၂၁ Sagittarius သည်သူတို့၏ Saturn နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော Pluto ရှိသူတို့၏ Mars ကိုတွဲဖက်ထားသည်။
သူမကပြပွဲ၏တိပ်လုပ်သည့်အခါ။ အင်္ဂါဂြိုဟ်သည် (၂၁) Sagittarius တွင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် viral meme ဖြစ်လာသောအခါ Saturn သည် ၂၁ Sagittarius တွင်ရှိသည်။
ယခုဤ Saturn အကူးအပြောင်းသည်အထူးသဖြင့်သာယာသောအကူးအပြောင်းမဟုတ်ပါ။ ဒီမှတ်စုတိုဟာငါတို့အတွက်ရယ်စရာကောင်းနေပေမဲ့၊ သူမအတွက်ပျားရည်မဖြစ်နိူင်ဘူးဆိုတာကိုသတိရရပါမယ်။ သူမသည်ကမ္ဘာအနှံ့လှောင်ပြောင်ခံရသည့်အကြောင်းအရာဖြစ်လာသည်။
၎င်းမှာ Saturn ဖြစ်သည်။ ဂျူပီတာ - ယူရေးနပ်စ်အတိုက်အခံများကသူမ၏ Venus ရင်ပြင်ကိုမကောင်းသည်မှာဝန်ခံရမည်။ ပြီးတော့သူမရဲ့ဆောင်ပုဒ်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုရောင်းခြင်းအားဖြင့်သူမမျှော်လင့်မထားတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုသူမရဲ့အားသာချက်အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေပုံရသည်။ မင်းဒါကို 'Cash me Ousside, How Bow Dah' ဆိုတဲ့စောင်တစ်ထည်လောက်ပဲတင်စရာမလိုပါလား။ Ahhhh အရင်းရှင်ဝါဒသူမရဲ့ငွေအတွက်သင်ကနောက်ပိုင်းမှာ Danielle, How Bow Dah? တစ်ခါတလေသတင်းကိုဖတ်တဲ့အခါစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နက္ခတ်ဗေဒင်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိတယ်လို့ငါသံသယဝင်တယ်။
ဒါဟာနည်းနည်းထူးဆန်းတဲ့အသံစေခြင်းငှါ၎င်း tro တူသောအနံ့ပေမယ့် Donald Trump နက္ခတ်ဗေဒင်, မကောင်းတဲ့နက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာကိုအသုံးပြုသည်။
သူ့နာမည်က Steve Bannon ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Steve Bannon ပါ။ အမှန်မှာနာဇီနှင့်စာတန်တို့၏အဖြူရောင်လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုနှင့်စာသားကိုလေးစားကြည်ညိုသူနှင့် Dick Cheney မှ Goebbels နှင့်တဲ Jabba တွင်နေထိုင်သောထို muppet အကြားတစ်နေရာရာ Grima WormtongueHe kernels အထိသမ္မတ၏မဟာဗျူဟာအကြီးအကဲဖြစ်သည်။ * Disjointed နှုတ်ခမ်း smacking * ဒါကြောင့်သူဘယ်လိုနက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာဖြစ်သနည်း ကောင်းပြီ၊ ငါတို့နားလည်တာကနက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာမဟုတ်ဘူး
သူကစတုတ္ထအလှည့်သီအိုရီကိုလက်ခံသည်။ လူမှုရေးသမိုင်းပညာရှင် William Strauss နှင့် Neil Howe တီထွင်ခဲ့သောမျိုးဆက်တစ်ခုသီအိုရီ။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်အမေရိကန်သမိုင်းနှင့်မျိုးဆက်တစ်ဆက်လုံးတွင် ၈၄ နှစ်လုံးလုံးတသမတ်တည်းသောပုံစံကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။
မျိုးဆက်အုပ်စုများနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းများနှင့်အသစ်စတင်ခြင်းများကိုကန့်သတ်ခြင်း။ ဤအရာအားလုံးသည်နက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာများမှအပလူတိုင်းအတွက်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီဟာက ၈၄ နှစ်ကြာယူရေးနပ်စ်သံသရာအကြောင်းတကယ်ကိုဘယ်သူကအလိုအလျောက်သိတာလဲ။
DUH လိုပဲ။ ဒီတော့ဘာသဘောတူညီမှု? Bennon ကယခုကျွန်ုပ်တို့သည်စတုတ္ထအလှည့်သို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးလက်ရှိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခက်ခဲသောလက်ယာယိမ်းနိုင်ငံရေးပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းအားဖြင့်အမေရိကန်သည်လိုအပ်လျှင်မိမိကိုယ်ကိုအတင်းအဓမ္မပြန်လည်သတ်မှတ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ အလှည့်သုံးခုမှာအမေရိကန်စစ်ပွဲကြီးများဖြစ်သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်၊ ပြည်တွင်းစစ်နှင့်လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲ။ ဒါကြောင့်သူကမကြာခင်စစ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာတော့မယ်လို့ထင်တယ်၊ ငါဟာငါပဲလား၊ ဒါမှမဟုတ်မလွှဲမရှောင်သာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲကိုအယုံအကြည်ရှိစေတဲ့သူတစ်ယောက်ရှိရင်ပိုကောင်းလိမ့်မယ်။ ဒီတော့သူကနက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာဆိုးလို့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ပြောရတာလဲ။ သူကစတုတ္ထအလှည့်ယခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်ထင်၏။
၀ င်ငွေခန်ဓာကိုယ်ရှိသူမည်သူမဆို၎င်းတို့သည် ၈ နှစ်ခန့်စောသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။ တော်လှန်ရေးစစ်ပွဲ၊ ပြည်တွင်းစစ်နှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းအမေရိကန်တို့၏ပါဝင်မှုသည်ယူရန်းနပ်စ် Gemini တွင်ရှိစဉ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ယူရန်းနပ်သည် ၂၀၂၅ အထိ Gemini သို့မဝင်ရ။
Trump ဒုတိယသက်တမ်းအိမ်ဖြူတော်၌ရှိနေမည်ယူဆ * ထိတ်လန့်ဂီတပြဇာတ် * Uranus Gemini ဝင်သောအခါသူသည်ရုံးထဲမှာမဟုတ်ဘူး။
ပြီးတော့ဒီအချိန်အတွင်းဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်ထူးဆန်းသည်မှာ Donald Trump သည် Gemini, the Sun conjunct Uranus တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဒီတော့သူကသူ့ယူရေးနပ်စ်ပြန်လာတဲ့အခါဘာကိုမျှော်လင့်ရမလဲဆိုတာဘယ်သူသိလဲ။ Bannon ၏အချိန်ကာလသည်မှားယွင်းနေပုံရသည့်တိုင် ပို၍ ကိုက်ညီမှုမရှိပါ။
သူကလုံးဝယူမှားယူနုသည်မိမိကိုယ်ကိုအတင်းအဓမ္မသတ်မှတ်ရန် Gemini သို့ပြန်လာသည်။ Gemini က Gemini ရဲ့လက္ခဏာပဲ။ ငါစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက Uranus Gemini မှာရှိတုန်းက Gemini ဆိုတဲ့အတွေးကထူးဆန်းတဲ့နည်းနဲ့ထွက်လာတာပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည်ဗြိတိသျှအင်ပါယာမှခွဲထွက်ခဲ့သည်။
ငါတို့သည်ငါတို့၏အထူးသဖြင့်ဆက်ဆံရေးအတွက်အမွှာမဟုတ်လော အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်သည်ညီအစ်ကိုကိုဆန့်ကျင်သူအဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။ အမွှာများ၏အမှတ်အသားဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်စစ်အေးတိုက်ပွဲကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ အမေရိကန်နှင့်ရုရှားတို့သည်အရင်းရှင်ဝါဒနှင့်ကွန်မြူနစ်ဝါဒဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ယူရေးနပ်စ Gemini အတွက်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသောအခါ။
ဒီအမွှာအရာကထပ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်သေချာပါတယ် ဒါပေမယ့်မေးခွန်းကဘာလဲ။ လွတ်လပ်ရေးစစ်ပွဲနှင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကဲ့သို့သောပြင်ပခြိမ်းခြောက်မှုများကိုတိုက်ဖျက်နိုင်မည်လား။ ဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုဖြစ်မလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်လိုပြည်တွင်းရေးကွဲပြားမှုတွေကြောင့်လား။ ဒါက Astro လိုအနံ့ပါ။ ယခုငါနက္ခတ်ဗေဒင်ကိုချစ်၏။
ဒါပေမယ့်မကြာခဏဆိုသလိုမင်းဟာသိပ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်မရှိတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံသူတို့သည်တကယ့်ဝေဒနာခံစားနေရသည်။ ။
Tro ။ ရော့ခ်တေးဂီတ * ယနေ့ငါ br ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကို yud ဟုခေါ်သည်။ နက္ခတ်ဗေဒင်အဘိဓာန်ကထိုအရာကိုဤနည်းဖြင့်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်သည်။ * ချိုမြသော, ဆင်ဖိုနီဂီတပြဇာတ်။ တစ် ဦး horoscope တ ဦး တည်းအတွက်ဂြိုလ်နှစ်ခုတစ် ဦး ချင်းစီကတခြားနှင့်အတူအနီးကပ် sextile ဖွဲ့စည်းပြီးတော့နှစ်ခုစလုံးဂြိုလ်တစ်ချိန်တည်းမှာ quincunx ဖွဲ့စည်း, တတိယဂြိုဟ်နှင့်အတူရှုထောင့်။
ဥပမာအားဖြင့် အကယ်၍ နေသည် 15 Aries ဖြစ်၍ 15 Gemini တွင် Saturn သို့ sextile ဖြစ်လျှင်ဂြိုလ်နှစ်ခုလုံးသည်လ၏ Scorpio quinkunx တွင်လည်းအတိအကျအိုင်အိုဒင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ * စံချိန်တင်ခြစ်ရာဆူညံသံများ။ ပို၍ ပင်ကိုက်ညီမှုမရှိသောပါးစပ်ဆူညံသံများ * sextile ရှိဂြိုဟ်နှစ်လုံး၏ဗဟိုနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ရှိသောကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်အလွန်ကြီးသောအသံမဟုတ်ပါ။
သူဘယ်လိုဒီအမည်ပြောင်ကိုရခဲ့တာလဲ - ဘုရားသခင်၏ကံကြမ္မာလက်ချောင်း၏လက်ချောင်း အိုင်အိုဒင်းနှင့်အဓိကပြproblemsနာသုံးခု။ * lip smacking * ကျွန်မရဲ့ပထမဆုံးပြproblemနာကတော့အလယ်မှတ်ကကြမ်းတမ်းပြီးသားဖြစ်နေတယ်။ ငါသာအလယ်ပိုင်းအမှတ်နှင့်တွဲဖက်။ ကြည့်ဖို့လေ့လိမ့်မယ်။
ယာယီအတိုက်အခံဆန့်ကျင်သည်။ ဒါဟာဒုတိယအချက်က sextiles ဟာအားနည်းနေတဲ့အရာလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ ကမ္ဘာဂြိုဟ်နှစ်လုံး၏ဗဟိုဆီသို့ ဦး တည်သောကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုမချစ်ပါ။ အဓိကလမ်းကြောင်းတစ်ခုတွင်အခြားဂြိုလ်နှစ်ခု၏ဗဟိုနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောဂြိုလ်များရှိသည်။
ဘုရားသခင်၏လက်ချောင်း ဒီတစ်ခါလည်းခန္ဓာကိုယ်၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများရှိပါတယ်။ ဘုရားသခင်၏သရက်ရွက်။
ဘုရားသခင်၏ Wenis ။ အဲဒီအစားတတိယကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကွင်တန်ဂြိုလ် ၂ လုံးကို Golden Yod လို့လူသိများတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်းဒီတော့ကွဲပြားခြားနားသောသတ္တုများသို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသောဘုရားတို့ထံမှရှိပါတယ်။
ဘုရားသခင်၏သံအခွံမာသီး။ ဘုရားသခင်၏ငွေလှံတံ Yod ။ * Burps * ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့တတိယအချက်ကအငြင်းပွားစရာပဲ၊ Quincunxa ရဲ့ရှုထောင့်တွေကမှန်တယ်လို့ငါမထင်ဘူး။ * Loud Buhing * အနည်းဆုံးအချိန်အများစု။
၎င်းတို့သည်စက်ဝုိင်းတစ်ခုလုံး၏ကိန်းဂဏန်းကိုအခြေခံခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုအပေါ်အခြေခံသည် trine သုံးပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ စတုရန်းလေးခုကိုအခြေခံသည်။
quincunx သည် 2.4 ဖြင့်ပိုင်းခြားခြင်းကိုအခြေခံသည်။ 2.4 ၏ esoteric အဓိပ္ပာယ်ကိုကဘာလဲ? နည်းပညာအရစာလုံးနှစ်လုံးအကြားတည်ရှိနိုင်သည့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုဆန့်ကျင်သောတစ်ခုတည်းသောအမျိုးအစားမှာ P တူညီသောအက္ခရာများဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Libra နှင့် Taurus နှစ်ခုစလုံးကို Venus, Aries နှင့် Scorpio တို့က Mars ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်။
ထိုနှောင်ကြိုးသည်ဒီဂရီထက်နိမိတ်လက္ခဏာများအရသော်လည်း၊ Aries ရှိဂြိုဟ်တစ်လုံးနှင့် Scorpio ရှိဂြိုဟ်တစ်ခုသည်ဤ quincunx ဆက်နွယ်မှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဒီလိုမျက်စိကန်းတဲ့နေရာ။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးအင်္ဂါဂြိုဟ်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့တည်ရှိနိုင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်, Antiscia သို့မဟုတ် Contra-Antiscia ဖေါ်ပြခြင်းဆိုင်းဘုတ်များအကြားဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဒီတော့ဒီနိမိတ်က Libra နဲ့ Pisces လိုပဲ။ ဒါမှမဟုတ် Aries နှင့် Virgo ။
ဤဖြစ်ရပ်တွင်၎င်းတို့သည်ဤဆန့်ကျင် Antiscia သို့မဟုတ် antiscia ဆက်ဆံရေးများမှတဆင့်ဆက်နွယ်မှုရှိရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊3Aries ရှိဂြိုဟ်တစ်ခုသည် Virgo 27 တွင်ရှိသောအခြားဂြိုဟ်တစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည်ရေတွက်ရန်အတွက် antiscia ဆက်ဆံရေးတွင်ရှိနေရမည်
ထို့ကြောင့်နည်းပညာအရအမှန်တကယ်တည်ရှိနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည်ဂြိုလ် ၂ ခုသည် ၁၅ ဒီဂရီ Taurus နှင့် Pisces ရှိ sextiles များဖြစ်ပြီး ၁၅ Libra တွင်ဂြိုဟ်တစ်ခုနှင့်သူတို့၏ဗဟိုကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ထားသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်တောင်မှပဲ ...
အဘယ်ကြောင့်? သင်ယနေ့ကောင်းစွာမလည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိပါက yod အတွက် Wikipedia စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ။ ထိုအခါငါကိုးကား: ချိုမြိန်, ဂန္ထဝင်ဂီတအပိုင်းပိုင်း။ * အဒေါ့ဖ်ဟစ်တလာတွင်ရွှေတံဆိပ်တစ်ခုရရှိခဲ့သည်။
ဥပမာအားဖြင့်, သူသည်သူသည်သူ၏တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုအလွဲသုံးစားလုပ်သည်ဟုဆိုနိုင်ပြီးသူ၏အနုပညာကျောင်းမှစာမေးပွဲစစ်ဆေးသူများကသူ၏အနုပညာစွမ်းရည်ကိုစွပ်စွဲထားသောသူ၏အနုပညာစွမ်းရည်ကိုလျစ်လျူရှုခြင်းသို့မဟုတ်လျှော့တွက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်သူ၏ထူးခြားသောလိမ္မာပါးနပ်မှုကိုနောက်ဆုံးတွင်အဖျက်စွမ်းအားများသောအခြားနေရာများတွင်ထားခဲ့သည်။ ဖန်တီးမှုထက်ပိုပါတယ်။ စံချိန်တင်ခြစ်ခြင်း * ၎င်း၏တက်နေသည့်အုပ်စိုးရှင်သည် Venus Retrograde နှင့်ရှစ်ကြိမ်မြောက် DEATH အိမ် Marsin တို့နှင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဆိုးရွားပြင်းထန်သောအကြမ်းဖက်နည်းလမ်းများဖြင့်အလှဆင်ရန်နှင့်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်ဆန္ဒရှိသောဗီးနီးယပ်စ်ဆန္ဒကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ! မဟုတ်ပါ။ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဒါဟာသူ့ရဲ့ရွှေရောင် Yod ပါ။ ဘုရားသခင်၏လက်ချောင်းသည်ငါ့ Astro တွင်နာကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခုမင်းရဲ့ streetORight ထဲမှာမင်းအဖြစ်သင့်ဆီမှာတစ်ခုခုရှိတယ် .... tro ။
ဒီဇာတ်လမ်းမှာ Uranus Gemini မှာငါတို့ပြောခဲ့တာနည်းနည်းများတယ်၊ Gemini ရှိ Uranus အကြောင်းနှင့်အမေရိကန်သမိုင်းကိုပိုမိုဖတ်လိုလျှင် Nick Dagan ၏ BestURANUSA စာအုပ်ကိုဖတ်ရန်၊ စာအုပ်ဝယ်ရန်၊ သင်နောင်တမရပါ၊ အလွန်ရောင်စုံသည်။ ပြီးတော့ပုံတွေအများကြီးရှိတယ်။ နှင့်ပျက်စီးခြင်း။
အရမ်းကောင်းတယ် သင်ဆောင်းပါးဖော်ပြချက်တွင်ဝယ်ခြင်းငှါ link ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်၏နက္ခတ်ဗေဒင်နှင့်ကိုက်ညီမည့်အခြားအရာမှာနက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာခရစ်ဘရန်နန်သည်သူဆယ်စုနှစ်ခန့်လုပ်ကိုင်နေသည့်စာအုပ်ကိုထုတ်ပစ်လိုက်ပြီးစောင့်ဆိုင်းသင့်သည်။
၎င်းကို 'ဂရိနက္ခတ်ဗေဒင် - ကံကြမ္မာနှင့်ကံကြမ္မာလေ့လာခြင်း' ဟုခေါ်သည်။ တကယ်တော့ဒီစာအုပ်ကိုကြည့်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့တယ်။ ငါမကြာမီပြန်လည်သုံးသပ်အပြည့်အဝရေးသားခြင်းပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ငါကဤလေးနက်နက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာတစ် ဦး ပိုင်ဆိုင်ရမယ်တဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသံသယမရှိဘဲသင်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်ဤသည်အနာဂတ်တွင်နက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာများစုဆောင်းခြင်းတွင်အဓိကဖြစ်လိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။ allit သည်သရုပ်ဖော်ပုံများကိုသင်ချက်ချင်းအသုံးချနိုင်သောဂရိနက္ခတ်ဗေဒင်ဆိုင်ရာအယူအဆများ၏အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်နှင့်နမူနာများကိုဖော်ပြထားသည်။ ဤစာအုပ်သည်သင့်အတွက်မည်မျှအရေးကြီးသည်ကိုကျွန်ုပ်မရေးသားနိုင်ပါ။ ဆောင်းပါးဖော်ပြချက်တွင် Amazon link ကိုတင်ခဲ့သည်။ သင်ဖတ်လျှင်နက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာတစ် ဦး ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
သငျသညျ 10 ပေါင်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ ကောင်းပါတယ် အရမ်းကောင်းတယ်
အံ့ဩစရာပါလား။ YUUUUGE ပါ ဒီတော့ဒီစာအုပ်တွေဟာမင်းအတွက်ပဲဆိုတာမင်းတွေ့လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။
ဤဆောင်းပါးကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက၎င်းကိုကြိုက်နှစ်သက်။ ထားခဲ့ပါ။ ဒုတိယသောကြာနေ့တိုင်းသင့်အားဆောင်းပါးအသစ်များကိုပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ရုပ်သံလိုင်းကိုစာရင်းသွင်းသင့်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီမှာငါ့မြည်းကိုထောကျပံ့။ Big Fat Astro Vlog ၏ပထမဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲကိုကြည့်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ငါပက်ထရစ် Watson ပါ။ ကျွန်တော်ဘောင်းဘီမဝတ်ပါဘူး။
Sun trup Jupiter ဆိုတာဘာလဲ?
နေကဂျူပီတာကိုလေ့ကျင့်သည်မွေးကင်းစကလေးသည်သင့်ကိုကံကောင်းခြင်း၊ ရက်ရောခြင်း၊ သင်ဟာအမှန်တကယ်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလူတိုင်းနဲ့သဟဇာတရှိသင့်တယ်။ မင်းမှာရှိတာတွေကိုအမြဲတမ်းပျော်နေပေမဲ့မင်းရဲ့လိုအပ်တာထက်ပိုပြီးအဆင်ပြေမှာပါ။နှစ်ဆယ်။ ၂၀၁၄
ဒီနေရာမှာဒီဇွန်လမှာဖြစ်ပျက်လာမယ့်၊ Pisces ရှိကင်ဆာ trine Jupiter မှာနေဖြစ်မည့်ငါ့အကြိုက်ဆုံးရှုထောင့်တစ်ခုမှအကြံဥာဏ်အနည်းငယ်ကိုငါမျှဝေသွားမယ်။ ဤသည်ရှုထောင့်ကျိန်းသေဇွန်လအတွက်ဖြစ်ပျက်ဖို့ကြီးစွာသောနက္ခတ်ဗေဒင်ရှုထောင့်ငါ၏အတိုစာရင်းတွင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလမှာနက္ခတ္တဗေဒရှုထောင့်ကနေကြည့်နေတဲ့ဒရာမာဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Venus Cancer in and Pisces ရှိ Jupiter အကြားမှာလည်းတကယ်ကောင်းတဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်။ ဤရှုထောင့်သည်ဇွန် ၂၃ ရက်တွင် ၂ ဒီဂရီကင်ဆာမှဂျပ်ပီတာရှိရာ ၂ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိဖြစ်ပွားသည်။ အခုတော့ဂျူပီတာဟာ retrograde ဖြစ်နေပြီ၊ ဘူတာရုံကျဆင်းရုံပဲ။
ငါတို့မူကား Pisces မှာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ယူအက်စ်ရှိသည်။ Sun နဲ့ Jupiter တို့အတူတူငါဘာကိုသဘောကျလဲ။ ငါမပြောမီ - ဤဆောင်းပါးကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက၊ အခြားသူများလည်းဤအချက်အလက်ကိုခံစားနိုင်စေရန် 'Like' ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အပတ်စဉ်ဗီဒီယိုစီးရီး၏ဤရှုထောင့်ကိုနှစ်သက်လျှင်အနာဂတ်၌သင်ပိုမိုရရှိစေရန်ကျွန်ုပ်၏ချန်နယ်ကိုစာရင်းသွင်းပါ။
ကျွန်ုပ်အသင်းဝင်ရန်စာရင်းသွင်းပါ။ ယခုကဲ့သို့သောဆောင်းပါးများကိုသင်ယခုဖြစ်ပျက်နေသည့်ရှုထောင့်တိုင်းမှသတင်းများအပါအဝင်နှစ်စဉ်အပတ်တိုင်းလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ အဆိုပါကောင်းသောသူမြားနှင့်လှည်သူမြား။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး trup ဂျူပီတာနှင့်ပတ်သက်။ ဘာကောင်းပါသလဲ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည် Renaissance နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှင် Marsilio Facino ၏ကျေးဇူးတော်သုံးပါးအကြောင်းရေးသားထားသောမှတ်ချက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရည်ညွှန်းဖော်ပြချက်တစ်ခုကိုဖော်ပြလိုသည်။ ၎င်းတို့သည်သက်ရှိသို့မဟုတ်သက်တမ်းကိုအတည်ပြုနိုင်သောဂြိုဟ်သုံးခုဖြစ်သည်။
ဤရွေ့ကားအနာရောဂါငြိမ်းစရာ, ကျန်းမာခြင်းနှင့်တက်ကြွနှင့်ဆက်စပ်သောကြောင်းဂြိုလ်များနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘဝ၌ကောင်းသောအရာအချို့။ ဤဂြိုလ်သုံးခုသည်ဗီးနပ်စ်၊ ဂျူပီတာနှင့်နေတို့ဖြစ်သည်။ ဤဂြိုဟ်နှစ်ခုကိုအဆင်သင့်ဖြစ်စေသောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သော sextile သို့မဟုတ် trine သို့မဟုတ်တွဲဖက်မှုများကိုအတူတကွပေါင်းစပ်စေသောရှုထောင့်တိုင်းကိုအများအားဖြင့်နေနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိခြင်း မှလွဲ၍ ဤဂြိုဟ်များအတွက်အဆင်ပြေပုံစံတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။
သို့သော်၎င်းသည်အလွန်ထူးခြားသောအရာဖြစ်သည်။ နေနှင့်ဆက်စပ်မှုအကြောင်းသင်ပိုမိုသိလိုပါကကျွန်ုပ်တွင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိသည်။ ဤကျေးဇူးတော်သုံးခုအနက်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုအကြားရှုထောင့်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တွေ့မြင်တိုင်းweာမှကောင်းသောအရာတစ်ခုရလာသည်ကိုငါသိ၏။
Sun နှင့် Jupiter တို့သည်အတူတကွကူညီခြင်း၊ ထောက်မခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ ကင်ဆာရှိနေသည်ပင်လယ်၌အနည်းငယ်သာရှိပြီးအထူးဂုဏ်သိက္ခာမရှိပါ။ နေသည်လ၏နိမိတ်လက္ခဏာအောက်တွင်ရှိနေသဖြင့်၎င်းသည်နေ၏ပုံမှန်လမ်းကြောင်းနှင့်ဆန့်ကျင်သောအရာများကိုလုပ်ဆောင်ရန်နေရာဖြစ်သည်။
သို့သော်ကင်ဆာရှိနေသည်ဤလှပသောကောင်းချီးနှင့် Pisces ရှိဂျူပီတာမှဤအကူအညီများစွာရရှိသည်။ ဤသည်သည်ကြီးစွာသောထောက်ခံမှု, ကြီးသောလမ်းညွှန်မှု, တကယ့်ကြီးမြတ်လမ်းညွှန်သို့မဟုတ်ဆရာသို့မဟုတ်လမ်းပြမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိခြင်းအကြောင်းပါ။ ဤဉာဏ်ပညာကိုသင်ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေပြီး၎င်းကိုမျှဝေရန်နည်းလမ်းများသို့မဟုတ်နည်းလမ်းသစ်များရှိကြောင်းကိုသဘောပေါက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည်။
ငါထင်တာကဒီရှုထောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှဝေမှုတွေအများကြီးရှိတယ်၊ ဒီဟာက Jupiter ရဲ့နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး trigon ရဲ့သွင်ပြင်က ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်တဲ့တကယ့်ကိုစိတ်ဝိညာဉ်၊ ကြွယ်ဝပြည့်စုံစေတဲ့အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ၎င်းသည်သင့်အားတစ်စုံတစ်ရာကိုဟုတ်ကဲ့ပြောရန်၊ ရဲရင့်သော၊ စိတ်အားတက်ကြွဖွယ်ကောင်းသောသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသောအစီအစဉ်ဖြင့်ရှေ့ဆက်သွားရန်အားပေးသည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကြီးထွားမှု၏ရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်၏သက်တောင့်သက်သာရှိဇုန်ပြင်ပရှိအရာတစ်ခုကိုကြိုးစားကြိုးစားခြင်းဖြစ်သည်။
ကြီးထွားမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့သက်တောင့်သက်သာရှိသည့်ဇုန်ပြင်ပတွင်ဖြစ်ပျက်နေသည်ကိုသူတို့သိသည်။ သင်ပွင့်လန်း။ ကြီးပွားတိုးတက်လိုလျှင်နေရာလွတ်ယူရန်လိုအပ်သည်။ ထိုအခါနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး trine ၏ဤရှုထောင့်မကြာခဏကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုသို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအကြောင်း, သင်ထိုက်တန်, သင်တစ် ဦး နေရာရှိသည်, တွေ့မြင်ရန်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရှိသည်, သို့မဟုတ်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သမျှကိုဝေမျှဖို့ခွင့်ရှိသည် ။
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဂျူပီတာသည်သင်၏ဘဝနှင့်သင်၏ဘဝလမ်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သဲလွန်စအချို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဒါကဥပမာအလွန်သိမ်မွေ့နိုင်ပါတယ်
တစ်ခုတည်းအပြန်အလှန်တစ်ခုသို့မဟုတ် breadcrumb တစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင်သွားနေသည့်လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လျှောက်လှမ်းသင့်သည်ဟုသာအတည်ပြုသည့်လမ်းတစ်လျှောက်ရှိမုန့်ဖုတ်တစ်ခုကဲ့သို့ ဘုံရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်ရူပါရုံကို ဦး တည်အလုပ်လုပ်သောဤလူများစုစည်း။
ငါဂျူပီတာကိုရက်ရောမှုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာမင်းတို့ထဲကအတော်များများသိကြတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဂျူပီတာဟာကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအကြောင်းပါ။ ဒါပေမယ့် Pisces ဟာများစွာသောငွေတွေ၊ စည်းစိမ်တွေဒါမှမဟုတ်မင်းမှာရှိတာတွေထက်များစွာသောစိတ်ခံစားမှုတွေ၊ အစိတ်အပိုင်းတွေအမြောက်အမြားဒါမှမဟုတ်ဆက်သွယ်မှုတွေအများကြီးအကြောင်းကျွန်တော်ထင်တယ်။ Pisces ရှိဂျူပီတာတွင်၎င်းတွင်ပါဝင်သောအရာများရှိသည်။
မျှဝေရန်စိတ်ကူးသည် Pisces ရှိ Jupiter အတွက်အထူးသဖြင့် Sun-Jupiter ရှုထောင့်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည်ဟုငါထင်သည်။ ကျွန်ုပ်ပိုင်ဆိုင်သောကြွယ်ဝမှုကိုမည်သို့ဝေမျှနိုင်မည်နည်း။ အပိုဆောင်းစာအုပ်များ၊ အတွေးအခေါ်များသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံများသည်ဖြစ်စေပေးကမ်းခြင်း၏အမှန်တကယ်ခံစားမှုဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးမှာ 'Pisces in Jupiter အတွက်သိကောင်းစရာသုံးချက်' ခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်ဒီဆောင်းပါးမှာတင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ နောက်အပတ်မှာကြည့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ပြောတာက Jupiter နဲ့ Pisces ဟာရက်ရောစွာပေးရတာနဲ့အရည်အသွေးကိုထောက်ပံ့ဖို့နည်းလမ်းတွေရှာတာဘယ်လောက်ရက်ရက်ရောရောရှိတယ်ဆိုတာတွေအများကြီးပြောတာပါ။ ငါနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး trine ဂျူပီတာဒီတကယ်ကိုကူညီရန်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ သင့်တွင်ကင်ဆာနှင့် Pisces ရှိသည့်အိမ်များကိုစဉ်းစားပါ။
သင်၏ကင်ဆာအိမ်၏အဓိကအကြောင်းအရာများကိုစဉ်းစားပြီးသင်၏ Pisces အိမ်၏အကြောင်းအရာများကိုစဉ်းစားပါ။ ဤအကြောင်းအရာနှစ်ခုသို့မဟုတ်သင်၏ဘဝ၏ဤကဏ္ two နှစ်ခုသည်အတူတကွအလုပ်လုပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားတစ်ခုအားမည်သို့ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်ကိုကြည့်ပါ။ Pisces အိမ်ရှိဂျူပီတာသည်သင်၏ဇယား၏ကင်ဆာအစိတ်အပိုင်းကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်၊ လမ်းညွှန်ရန်သို့မဟုတ်အားပေးရန်တစ်ခုခုကမ်းလှမ်းနိုင်သည်။ ဒီတစ်ခါလည်းကအခြားလမ်းန်းကျင်ပါပဲ။
ဒါပေမယ့်အနည်းဆုံးတော့သင့်မွေးကင်းစကလေး၏ဇယား၏ Pisces နှင့် Cancer အစိတ်အပိုင်းများအကြားကောင်းမွန်သော၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိသော၊ နေရဲ့ Trine Jupiter ရဲ့လရဲ့နောက်ဆုံးရှုထောင့်၊ ဒါမှမဟုတ်တစ်ပတ်ရဲ့အသွင်အပြင်အတွက်ဇွန်လဟာထွက်သွားဖို့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ငါပြောသင့်တယ်။ နှစ်ဒီဂရီကင်ဆာမှနှစ်ခုဒီဂရီ Pisces ။
ဤရှုထောင့်သည်ဇွန်လ ၂၃ ရက်၊ မွန်းလွဲပိုင်းမနက်ဖြန်မနက်စောစောမွန်းလွဲပိုင်းဖြစ်သောဇွန်လ ၂၃ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇွန်လ၏ဤနောက်ဆုံးအပတ်လယ်တွင်ဖြစ်ပျက်သည်။ ထိုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့သည်မျှော်လင့်ချက်အချို့ရရှိပြီးအနာဂတ်ကိုမျှော်လင့်နိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ကိုရှေ့ရှုရန် (သို့) ကျွန်ုပ်တို့သွားမည့်နေရာအတွက်အစီအစဉ်များပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီရန်သင့်တော်သောလူရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။
ဂျူပီတာသည်အမြဲတမ်းအနာဂတ်အတွက်ရည်ရွယ်သည်၊ ရေဒြပ်စင်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အလွန်အမင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျောက်ချရပ်နားနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတိတ်ကအမှတ်တရများနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုမည်သို့ခံစားနိုင်မည်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်အမှတ်တရများကိုသာအားကိုးရုံသာမကအနာဂတ်တွင်မိမိကိုယ်ကိုနှစ်မြှုပ်ရန်တစ်ခုခုအတွက်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အသုံးပြုရန်။ ကျနော်တို့အတိတ်ထဲကနေအနာဂတ်သို့ရွှေ့ချင်တယ်။
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသည့်နေရာသို့ရောက်ရန်လိုသည်၊ သို့သော်မည်သည့်ကိစ္စမျိုးတွင်မဆိုသင်ရှေ့ဆက်သွားလိုသည့်စိတ်ကိုအနည်းဆုံးတော့ရူပါရုံမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်နေရောင်ခြည်သုံးဂျူပီတာသည်ဤအဖွဲ့ (သို့) အဖွဲ့ ၀ င်အချို့ကိုအတူတကွစုစည်းပေးသည်။ သင်ဤစီမံကိန်းသို့မဟုတ်မစ်ရှင်တွင်သင်ပါ ၀ င်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အလွန်လှပသောရှုထောင့်
ဇူလိုင်လမှာ၊ နက္ခတ်ဗေဒင်ဆိုင်ရာလှည့်ကွက်တွေ၊ Jupiter Sun Trino ယူဆောင်လာနိုင်သောကြင်နာမှု၊ အလိုလိုကျစွာပြုမူခြင်းနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောခံစားချက်များနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုခံစားပါ။ ငါတို့အသင်းရှိနေတုန်းပျော်ရအောင်။
ကောင်းပြီ၊ အကယ်၍ သင်ဤဆောင်းပါးကိုကြိုက်လျှင်ကျွန်ုပ်၏ချန်နယ်ကိုစာရင်းသွင်းပါ။ သင်ဒီမှာအခမဲ့ဆောင်းပါးများကိုအမြဲတမ်းဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ ထိုရက်သတ္တပတ်၏ရှုထောင့်မျိုးစုံ၏ Deluxe ဗားရှင်းကိုသင်လိုချင်ပါကကျွန်ုပ်၏ website kellysastrology.com သို့ ဝင်ရောက်၍ အပြည့်အဝအသင်းဝင်ရန်စာရင်းသွင်းပါ။
အမြဲလိုလိုငါလာမယ့်လတိုင်အောင်, သငျသညျသတိထားမှီတိုင်အောင်, နောက်လအဖွဲ့နှင့်အတူပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
Uranus Scorpio ဆိုတာဘာလဲ။
TheScorpio အတွက်ယူရေးနပ်စ: ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
ယူနန်နည်းပညာအသစ်၊ ပုန်ကန်မှု၊ တော်လှန်ရေး၊ သစ္စာဉာဏ်အလင်းနှင့်သမားရိုးကျမဟုတ်သောစဉ်းစားတွေးခေါ်မှု၏သင်္ကေတဖြစ်သည်။Scorpio အတွက်ယူရေးနပ်စသူပုန်ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ သူတို့ကအမြဲနှင့်အသစ်သောအမြင်အတွေးများနှင့်အတူတက်လာရန်စပါးကိုဆန့်ကျင်သွားနေကြသည်။
မင်းရဲ့အိပ်မက်အိမ်ကမင်းရဲ့နိူင်ငံနိူင်ငံနိူင်ငံနိမိတ်လက္ခဏာအဟတ်ပေါ်အခြေခံပြီးသင် Youtuber ကိုနောက်တစ်ခေါက်ခရီးသွားနေတယ်ဆိုတာငါတို့တွေ့ရတယ် လာကြ၊ , လာကြ၊ theာသို့နောက်ထပ်ကြည့်ရှုရန်လာကြ ကြယ်တာရာများကသင်၏အနက်ရှိုင်းဆုံးအိပ်မက်များနှင့်အနက်ရှိုင်းဆုံးအမှန်တရားများကိုဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။
ကြယ်တာရာများကိုကျွန်ုပ်တို့မကြည့်နိုင်ခင်သင်၏အိပ်မက်နေအိမ်သင်၏နိဒါန်းအမှတ်အသားကိုအခြေပြုပြီး subscribe ကို နှိပ်၍ အခြားအံ့သြဖွယ်ဆောင်းပါးများအတွက်သတိပေးခေါင်းလောင်းကိုမြည်ပါ။
ငါအနာဂတ်၌ရာသီဥတုဆိုင်းဘုတ်များနှင့်ပတ်သက်။ များစွာသောပိုပြီးဆောင်းပါးတွေကိုကြည့်ပါ။ ဒါပေမယ့်အခုတော့ဒီကိစ္စကိုဂရုစိုက်ဖို့ငါတို့ပတ်ပတ်လည်ကြည့်ရှုရန်ရှိသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များကသိပ္ပံနည်းကျရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာ၏လမ်းညွှန်မှုဖြင့်ပင်အနာဂတ်သည်မရေရာသည့်ကိစ္စဖြစ်သည်။
သင်၏နေအိမ်အကျယ်အ ၀ န်းသည်မည်သည့်နေရာသို့အလွယ်တကူသက်ရောက်နိုင်မည်နည်း။ မည်သည့်အိမ်အမျိုးအစားကိုကျွန်ုပ်တို့သေချာစွာပြောနိုင်သည်။ ကျနော်တို့ရူပါရုံကိုရ ...
ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့မြင်တယ် ...
ကျွန်ုပ်တို့စူးစမ်းလေ့လာမည့်ပထမနိမိတ်မှာ ၁) Aries ။
ဟုတ်ကဲ့၊ Aries ရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာ။ သငျသညျ Hustle နှင့်ပဟေleိနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမပြhasနာမရှိသူတစ် ဦး ကြိုးစားအလုပ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ...
ဒါဆိုမင်းရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အိမ်ကမြို့တော်အလယ်အလယ်မှာရှိတဲ့ penthouse suite ပါ။ Aries တစ်ယောက်အနေနဲ့မင်းကအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ချင်ပြီးတစ်ချိန်လုံးပြေးချင်တယ်၊ နောက်တစ်ခုကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်နေတယ်။ ဘယ် Aries အဖြစ်ခက်ခဲဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သငျသညျလုပ်ဖို့သွားကြသည်ဤကြိုးစားအားထုတ်မှုအားလုံးနှင့်အတူ, သင်အချိန်မပေးဒီ Penthouse မတတ်နိုင်နိုင်ပါလိမ့်မည်! အတွင်းခန်းအကြောင်းအခုပြောကြရအောင် - အတွင်းပိုင်းမှာအရောင်တွေအများကြီးပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုသည်မှာပရိဘောဂတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနံရံပေါ်ရှိသင်၏ပန်းချီကားများ၊ ခေတ်သစ်အနုပညာစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားလုံးသည်သင်ရေနွေးငွေ့အချို့ကိုထုတ်ပစ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် (က) သင်၏တိုက်ခန်းအသစ်တွင်အားကစားရုံတစ်ခု (သို့) ခရှိစေရန်။ သင့်ရဲ့ penthouse မှာဘဲဥပုံနည်းပြနည်းနည်းဒါမှမဟုတ်ယောဂဖျာလေးတောင်ထားပါ။
အကယ်၍ သင်သည် Aries ကိုပျင်းနေလျှင်သင်၏ပရိဘောဂများကိုပြန်လည်စီစဉ်ခြင်း (သို့) သင်၏အလုပ်ထဲသို့နာရီပေါင်းများစွာထပ်ထည့်ခြင်းဖြင့်တစ်နေ့တာကိုကုန်ဆုံးနိုင်သည်။ သငျသညျနည်းနည်း workaholic သင်ဤချင်တယ်ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးသိကြ၏။ ၂) နွား၊
သင်၏ Taodi ကဲ့သို့သင်၏နိူင်ငံနိမိတ်လက္ခဏာကိုနာမည်ပေးသော Taurus ကဲ့သို့ပင်သင်ကြီးမားသောအစိမ်းရောင်နှင့်သဘာဝကဲ့သို့သင်, Taurus ။ အဲဒါကြောင့်မင်းဟာတိုင်းပြည်မှာမွေးမြူရေးခြံကြီးတစ်ခုလိုချင်တယ်။ မင်းရဲ့အကြီးမားဆုံးစွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖြစ်တဲ့သဘာဝကိုချိတ်ဆက်ချင်တယ်။ မွေးမြူရေးခြံတွင်ဘဝနှင့်အတူလိုက်ပါလာသောအေးဆေးတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုသည်အပိုဆုကြေးတစ်ခုဖြစ်သည်။
မင်းလှပတဲ့လယ်ယာမြေထဲကိုငါတို့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါဖက်ရှင်ထက်ပိုပြီးအသုံးဝင်တဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ မြို့ထဲကဖက်ရှင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးဟာသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးကမ္ဘာမြေပေါ်ကိုဆင်းသက်လာတာပါပဲ။ Taurus တစ်ယောက်အနေနဲ့ခင်ဗျားတည်ငြိမ်ချင်တယ်။
သင်တို့သည်လည်းသဘာဝအရောင်များဖြစ်သောအပြာရောင်၊ အစိမ်းရောင်၊ အဝါရောင်များအပြင်သဘာဝသစ်သားများစွာလိုအပ်သည်။ အလှဆင်ခြင်းအတွက်သင်၏အိမ်ထဲသို့ပန်းများနှင့်အပင်များကိုထပ်ဖြည့်ခြင်းဖြင့်သင်၏သစ်သားပုံစံကိုဖြည့်စွက်ပါ။ သင့်ကိုနာကျင်စေလျှင်ပင်၊ ကမ္ဘာမြေနှင့်သင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုပိုမိုခိုင်မာစေရန်သဘာဝ မှနေ၍ တစ်စုံတစ်ခုကိုသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
သင်၏ဆက်သွယ်မှုအားကောင်းလေ၊ သင်ပိုမိုခံစားရလေဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတော့မင်းကမိသားစုကြီးတခုကိုဖျော်ဖြေနေတယ်။ 3) Gemini ။
ဟုတ်ကဲ့၊ စကြ ၀ zာသည်နိမိတ်လက္ခဏာအသစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာရန်လမ်းခင်းပေးနေပါသည်။
အမွှာ! သူတို့ကမင်းတို့ရဲ့အနာဂတ်အိပ်မက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြသတယ်။ မဟုတ်ပါ၊ စောင့်ပါ၊ ပြန်လာပါ။ တောထဲ၌တဲရှိပါသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်တော်တို့သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူနွေရာသီအားလပ်ရက်အတွက်အဆင်ပြေစေမည့်သေးငယ်ပြီးအိမ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
သို့သော်၊ ၎င်းသည်သင့်အတွက်ထွက်ပြေးရန်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်သင်၏ပြီးပြည့်စုံသောအမြဲတမ်းနေထိုင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ အမွှာအဖြစ်ပေါင်းသင်းခြင်းကိုသင်နှစ်သက်သော်လည်းဤအိမ်သည်သင်၏တစ် ဦး တည်းသောကျွမ်းကျင်သောကျွမ်းကျင်မှုကိုလေ့ကျင့်ရန် ပို၍ ပင်ကောင်းသည်။ ဒါ့အပြင်သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုသတိရပါ၊ ဒါကြောင့်သေးငယ်တဲ့နေရာတစ်ခုကပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ပရိဘောဂတွေနည်းသွားလိမ့်မယ်။
ပရိဘောဂအရ၊ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အဆက်မပြတ်ရှုပ်ထွေးမှုအတွက်သင့်တွင်အလင်းနှင့်အသေးစားပစ္စည်းများရှိသင့်သည်။ Taurus ကဲ့သို့ Gemini Ge သည်တောက်ပသောအရောင်များကိုနှစ်သက်သောကြောင့်သင်တို့နှစ်ယောက်သည်ပရိဘောဂဆိုင်တစ်ခုတည်းတွင်ပင်စျေးဝယ်ထွက်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်အမွှာအနေနှင့်သင်၏မီးဖိုချောင်သည်ခေတ်မီရမည်ကိုသင်သိပြီးဖြစ်သည်။
ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတောင့်တင်းခိုင်မာပြီးနေအိမ်ဖြစ်ပေမဲ့သင့်ရဲ့မီးဖိုချောင်ကိုမြင်တွေ့ရမယ့်မြင်ကွင်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ၄) ကင်ဆာ။ အခုငါတို့ကင်ဆာလက္ခဏာသစ်တစ်ခုမြင်နေရတယ်။ သင်၏အိပ်မက်အိမ်သည်ပိုမိုမြန်ဆန်လာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုအရာသည် ပို၍ ပင်ရှင်းလင်းလာသည်။ သင်၏အိပ်မက်အိမ်၊ ချစ်လှစွာသောကင်ဆာသည်အထပ်နှစ်ထပ်ရှိဆင်ခြေဖုံးအိမ်ဖြစ်သည်။
ဂန္ထဝင်နှင့်လုံခြုံသည်, ဤအိမ်သည်သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။ Cancer အနေဖြင့်သင်သည်အန္တိမနေထိုင်သောအိမ်သူအိမ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်သောကြောင့်သင်၏အိမ်တွင်နေရာရှိသင့်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့အဆင်ပြေပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ နှစ်ထပ်အိမ်သည်ကောင်းမွန်သောဆင်ခြေဖုံးနေရာများထက်သင့်အိပ်မက်ကိုမိသားစုနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်အခြေချရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်သင့်အားနေရာများစွာပေးသည်နှင့်ဆင်ခြေဖုံးများသည်သင့်ကိုသက်သောင့်သက်သာရှိပြီးသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါသည်။ ရာသီဥတုနိမိတ်လက္ခဏာများ၏အမေအဖြစ်, သင်၏အလှဆင်အားလုံးအကြောင်းအိမ်သည်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုများအတွက်နှစ်သိမ့်ဖန်တီးအကြောင်း; သငျသညျကုလားထိုင်အများကြီးနှင့်ကြီးမားသောအဆင်ပြေဆိုဖာ, ကြီးမားတဲ့ထမင်းစားခန်းစားပွဲနှင့်ပျူငှါနွေးထွေးသောမျက်နှာပြင်များအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်။
ကလေးခေါင်းခေါင်းလေးများကဖြတ်သွားရင်မင်းရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အိမ်မှာဘယ်သူ့ကိုမှမနာစေချင်ဘူးမဟုတ်လား။ အထူးသဖြင့်သင်၏အနာဂတ်ကလေးများမဟုတ်ပါ။ ၅) လီယို။ ahh, အလီယို၏လက္ခဏာသက်သေ။
ချစ်ခင်ရသောလီယို၊ စကြ ၀ osာသည်သင်၏အိပ်မက်အိမ်၏ရှင်းလင်းသောပုံကိုသရုပ်ဖော်ထားသည် - မင်းနန်းတော်၌နေရမည်။ အကယ်၍ သင်သည်အလယ်ခေတ်မဟုတ်ဘဲလူတို့သတိပြုမိမည့်အရာတစ်ခုဖြစ်လျှင်ကြီးမားသောအိမ်ကြီးဖြစ်သည်။ သင်ဟာတောတွင်း၏ဘုရင် (သို့မဟုတ်ဘုရင်မ) ဖြစ်ပြီးမင်းမူသောနေရာတွင်နေထိုင်ရန်ထိုက်တန်သည်။
မင်းကလူတွေကိုဒူးထောက်တာဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးမင်းရဲ့ရဲတိုက်ရှေ့မှာ 'wow, ဒီနေရာကိုကြည့်' သွားစေချင်တယ် သို့သော်ဤဇိမ်ခံကားသည်စျေးပေါမည်မဟုတ်ချေ။ အိမ်မှအထဲရှိအရာအားလုံးအထိသင်ကုန်ကျစရာမလိုပါ။
မင်းရဲ့တံခါးတွေကမင်းအတွက်နောက်ကွယ်မှာဟောက်နေလိမ့်မယ်၊ မင်းရဲ့ခမ်းနားထည်ဝါသောမီးရောင်အလင်းရောင်ဖြင့်မင်းပြားသည်တောက်ပနေလိမ့်မည်၊ သင်၏လှေကားများသည်တောက်ပနေသောခါးပတ်တစ်ခုတွင်ရစ်ပတ်နေလိမ့်မည်။ လီယို, သင်သည်anကရာဇ်မင်း၊ aကရာဇ်မင်းဖြစ်သည်။ သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအလားအလာကောင်းသည်ကိုမျှော်လင့်ကြပါစို့၊ ၆။ Virgo၊ ယခုငါ့စကားကိုနားထောင်ပါ Virgo ။ Leo ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသင်မြင်တွေ့ရသည်။ Leo ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသင်မြင်တွေ့ရသည်။ အရူးဇိမ်ခံခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းမှသေးငယ်သော၊
သင့်အတွက်အပျို၊ သင့်အိပ်မက်အိမ်သည်စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသောအလွန်သေးငယ်သောအိမ်တစ်လုံးဖြစ်သည်။ အလွန်သေးငယ်သောအိမ်ငယ်လေးတစ်ခုကိုတစ်ခါမှမကြားဖူးသူများအနက် ၂၅၀ စတုရန်းပေရှိသောလူနေအိမ်လေးသည်သင်သွားသည့်နေရာတိုင်း၌သင်နှင့်အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်နိုင်သည်။ Virgo, သင်သည်သင်၏မယုံနိုင်လောက်အောင်စည်းရုံးနိုင်စွမ်းနှင့်လက်တွေ့ကျမှုတို့ကြောင့်သေးငယ်သောဘ ၀ တွင်ရှင်သန်နိုင်မည့်သူဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးဟာဆိုးဝါးလွန်းတယ်၊ ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ကြီးမားတဲ့ဖန်စီအိမ်တစ်လုံးကိုပိုက်ဆံဖြုန်းတာလဲ။ Virgo သေးငယ်ပါစေနှင့်၊ သင်၏အိပ်မက်အိမ်သည်တကယ့်အိမ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ 7) Libra ။ မင်းရဲ့ Libra အတွက်မင်းရဲ့ zodiac ညီအစ်ကိုတွေနဲ့မတူတာတခုခုပေးတယ်။
Libra ဖြစ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အိမ်အိပ်မက်ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သူကိုယ်တိုင်နှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများမဟုတ်ဘဲ၎င်းကိုဝန်းရံထားသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်ရေကန်တစ်ခုရှိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုသင်ရှာနေတာပါ။ ပါတီပွဲများကျင်းပခြင်းကိုသင်နှစ်သက်ပြီး၊ ရေကူးကန်၊ BBQs၊ မွေးနေ့များ၊ အားကစားပွဲများနှင့်ပါတီပွဲများကျင်းပခြင်းထက်ပါတီပွဲကျင်းပရန်ပိုကောင်းသည့်နေရာလည်းမရှိချေ။ သင်၏အိပ်မက်အိမ်သည်သင်လှပသောအပန်းဖြေအနားယူခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှု၏အာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်သည်။
Libra, သင်၏အနာဂတ်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှစ်မြှုပ်ခြင်းနှင့်လက်ဖြင့်သူမ၏ယူပါ။ POOL အက္ခရာများမှစတင်သောကမ်းလှမ်းမှုများကိုရှာဖွေပါ။ 8) Scorpio ။
သင်၏အိပ်မက်မြင်ကွင်းအိမ်မြင်ကွင်း Scorpio သည်ကျွန်ုပ်ကိုမြင်ပြီး၎င်းသည်ပုဂ္ဂလိကမြို့တော်အိမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ Scorpio တစ်ယောက်အနေနဲ့သင်ဟာ privacy ကိုလိုချင်တယ်။ သင့်ရဲ့ပိန်ကြုံသောအိမ်တွင်အဆင့်အမျိုးမျိုးရှိပါက၊ သင်သည်အဘယ်အရာကိုပုဂ္ဂလိကပိုင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မည်သည့်အရာမဟုတ်ကြောင်းကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင့်တွင် guests ည့်သည်များရှိပါက - သူတို့ကိုအပေါ်ဆုံးမှအပမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကန့် သတ်၍ သင်၏andရိယာကိုသင်၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောကိုယ်ပိုင်နေရာအဖြစ်ထားပါ။ သင်အမှန်တကယ်မည်သည့်နေရာ၌ရှိနေသည်ဖြစ်စေ၊ Scorpio သည်နက်နဲသောအရာတခုကိုရှင်သန်စေသည်။ 9) Sagittarius ။
သင် Sagittarius သည်နယ်လှည့်စိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏အနာဂတ်အိမ်တွင်ဘီးလေးဘီးရှိလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ RV ဆိုတာဟာသင် Sagittarius နေထိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့မင်းကဆင်းရဲသွားလို့မဟုတ်ဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်၊ သင်သည်ခရီးသွားရုံသာရှိလိမ့်မည်၊ သင်အခြေချနိုင်မည်မဟုတ်ပါ၊ သင်လိုချင်သည့်လွတ်လပ်သောစိတ်ဓာတ်သည်သင်၏ဆံပင်ကိုလေအားမှုတ်ထုတ်ရန်မလိုအပ်ဘဲ Machu Picchu လေဖြစ်စေ၊ ချီကာဂိုကလေလေ၊ မင်းရဲ့အနာဂတ်အိပ်မက်အိမ်ကမင်းကို Sagittarius ရှိလိမ့်မယ်။ ၁၀) Capricorn ။
သင်၏ Capricorn ကိုရှာဖွေရန်အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။ ဂြိုဟ်များသည်သင်၏အေးဆေးအေးဆေးသောအပြုအမူများကိုဖတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်သင့်အတွက်ထိုအိပ်မက်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိပြီဟုထင်ရသည်။ သာဓကအနိမ့်ကျသောတိုက်ခန်းဖြစ်သည့် Capricorn သည်သင်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သောရှုပ်ထွေးပြီးအေးမြသောစုပေါင်းမှုကြောင့်သင်အဓိကနေထိုင်သင့်သည့်နေရာဖြစ်သည်။
သင်အမြဲတမ်းသန့်ရှင်းစေလိုသောကြောင့်သင်ယင်းကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်လိုပေမည်။ ဒါကြောင့်သေးသေးလေးကိုယူပြီးပရိဘောဂအလင်းကိုထိန်းထားပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့လိုအေးခဲတဲ့ Capricorn ကိုမင်းခေါင်းထဲဆုံးရှုံးစေချင်လို့မဟုတ်ဘူး။ ၁၁) ရေငတ်။
မင်းရဲ့အိပ်မက် Aquarius အိမ်မှာမင်းဟာအနာဂတ်ကိုနည်းလမ်းများစွာနဲ့မျှော်လင့်နေတယ်။ သင်၏အိမ်သည်နှိမ့်ချပြီးကောင်းသောနေရာတွင်ရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော်စိတ်နှိမ့်ချခြင်းသည်အရေးမကြီးပါ။ အဘယ်သူမျှမ Aquarius, ကစွမ်းအင်ထိရောက် '' အစိမ်းရောင်အိမ် 'ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်မဟုတ်ဘဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောအိမ်တစ်လုံးကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးပြားများ၊ အပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်သောရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာများ၊ မိုးရေစုဆောင်းမှုစနစ်များ၊ သင်အာကာသနှင့်အဆုံးသတ်ပါကကြီးမားသောလေရဟတ်များ။ အကယ်၍ Aquarius ကိုသင်သိလျှင်၊ သင်၏ 'အစိမ်းရောင်' အိမ် (လူတို့အတွက်တစ်ခု)) ဘေးတွင်ဖန်လုံအိမ်တစ်ခု (ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအတွက်) ကိုတောင်မှရနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းကောင်းများ၏အနာဂတ်အိပ်မက်အိမ်ဖြစ်သည့် Pieces ကိုစူးစမ်းလေ့လာသည်။ Pieces zodiac သင်္ကေတအောက်မှာမွေးဖွားလာသူတွေဟာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုနဲ့လှပပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့ဆိတ်ငြိမ်တဲ့အိမ်မှာနေမှာပါ။ ဒီအပိုင်းအစတွေဟာအေးဆေးငြိမ်သက်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တယ်၊ မင်းဒီနေရာမှာတွေ့လိမ့်မယ်။
သင်၏အနာဂတ်အိပ်မက်အိမ်။ ငါတို့ထင်တာမှန်တယ်လို့မင်းထင်သလား။ သင်၏နေအိမ်အကျယ်အ ၀ န်းသည်မည်သည့်အိမ်တွင်နေထိုင်ရန်ထိုက်တန်သနည်း။ မင်းအနာဂတ်အနာဂတ်ကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်မှာတွေ့မြင်မလဲအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့မှတ်ချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ။ သင်၏နှလုံးကိုရှာ။ ကြယ်များကိုယုံကြည်ပါ။
ရိုက်ထည့်ပါမင်းရဲ့မွေးစာရင်းကအပေါ်ဆုံးအပိုင်း။ အောက်မှာကလိမ္မော်ရောင် Transit dropdown, ကို select လုပ်ပါယူနန်။ အောက်မှာကရှုထောင့်မှ dropdown, 180 /အတိုက်အခံ။ အောက်မှာကNatal သို့ dropdown ကိုရွေးချယ်ပါယူနန်နှင့်နှိပ်ပါတွက်ချက်သည်။၆ ။ 2021 ။
၁၂ နှစ်လောက်တိုင်းငါတို့အားလုံးဟာaလို့ခေါ်တဲ့အရာတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းကြရတယ်ဂျူပီတာပြန်လာ။ TO သို့ဂျူပီတာပြန်လာကံကောင်းထောက်မသောကမ္ဘာဂြိုဟ်သည်ဖြစ်ပျက်သောအခါဂျူပီတာငါတို့မွေးဖွားခဲ့စဉ်ကသူ၌ရှိခဲ့တူညီသောအစက်အပြောက်ပြန်သူ၏လမ်းစေသည်။ နက္ခတ်ဗေဒင်တွင်ပြန်လာမည်သည့်သဘာဝတရား၏အခါကမ္ဘာဂြိုဟ်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်ရောက်ရှိနောက်ကျောကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဇယားအတွက်၎င်း၏နေအိမ်အခြေစိုက်စခန်း။3 2016 ။
ငါ Sun trup Jupiter ရှိပါသလား?
Sun trine Jupiter natal ကသင့်ကိုကံကောင်းခြင်း၊ ရက်ရောခြင်း၊ သင်ဟာအမှန်တကယ်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလူတိုင်းနဲ့သဟဇာတရှိသင့်တယ်။ မင်းမှာရှိတာတွေကိုအမြဲတမ်းပျော်နေပေမဲ့မင်းရဲ့လိုအပ်တာထက်ပိုပြီးအဆင်ပြေမှာပါ။နှစ်ဆယ်။ ၂၀၁၄
ဂျူပီတာ Trine Saturn ဘာကိုဆိုလိုသလဲ
Theဂျူပီတာ Saturn trineကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိသူနှင့်သူတို့၏ကံကြမ္မာကိုယုံကြည်သူတစ် ဦး ၏ညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။ Theဂျူပီတာ Satine Saturnအကူးအပြောင်းအကျိုးခံစားခွင့်အနာဂတ်နှင့်ပိုမိုလွတ်လပ်သောဖြစ်လာရန်ကြိုးစားနေသောသူတို့၏လုပ်ရပ်များအတွက်အစီအစဉ်။၃၀ 2019 ။
အဘယ်ကြောင့် Uranus သည် Scorpio တွင်ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရသနည်း
တချို့ပြောကြတယ်ယူနန်ဟုတ်တယ်ချီးမြှောက်ခြင်းဒီဆိုင်းဘုတ်ထဲမှာ ဒါဖြစ်နိုင်လို့ပါကင်းမြီးကောက်နှင့်အတူမသက်မသာနေသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနက္ခတ်ဗေဒင်ဆရာများကပြောင်းလဲမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်Scorpio ရဲ့အနုတ်လက္ခဏာ 'သေခြင်း' ပုံရိပ်။ အားလုံးဆိုင်းဘုတ်များပြောင်းလဲမှုပါဝင်ပေမယ့်များအတွက်ပြောင်းလဲမှုကင်းမြီးကောက်ပိုပြီးသိသိသာသာဖြစ်ပါတယ်။
Jupiter Scorpio ဆိုတာဘာလဲ
TheScorpio အတွက်ဂျူပီတာသူတို့ရဲ့ကံကြမ္မာကိုထိန်းချုပ်အမြဲတမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကံကောင်းတာပဲ ထို့အပြင်သူတို့၏လျှို့ဝှက်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရသူတို့၏အစဉ်အလာမရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်စီမံကိန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအပေါ်ထားရှိသောခံစားချက်အမှန်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည်။ သူတို့ဟာယုံကြည်မှုရှိပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးနေတယ်။ ဒါဟာအလားတူသံလိုက်ဝါဒတစ်ခုအတွက်အခွင့်အရေးအသစ်များရရှိစေသည်Scorpio အတွက်ဂျူပီတာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။
ဂျူပီတာအတိုက်အခံယူရေးနပ်စကိုမွေးဖွားခြင်းဇယားတွင်သင်၌အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည့်နည်းနည်းရှိသည် - သင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်အန္တရာယ်များသောအခြေအနေများသို့မဟုတ်ရှည်လျားသောရိုက်ချက်များကိုဆွဲဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည်ဤလှုံ့ဆော်မှုများကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်ဖြစ်စေမထိန်းချုပ်သည်သင်၏ဇယားရှိအခြားအချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အနည်းဆုံးခေတ်သစ်အနောက်ပိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ယူранနပ်စ်သည်အင်တာနက်ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖြင့်သင့်အားသင်၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားသောစတိုင်ကိုအပြည့်အဝဖော်ပြရန်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည်။ လူမှုရေးစံနှုန်းများ၊ အတွေးအခေါ်ပညာ၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာများကိုသင်စမ်းသပ်ပြီးတွန်းအားပေးနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်ပြည်ပခရီးသွားခြင်းသည်သင်၏မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းကိုကျယ်ပြန့်စေပြီးသင်၏စိတ်ကိုတိုးစေသည်။
သုံးနှစ်တခါဂျူပီတာသည်မွေးကင်းစကမ္ဘာဂြိုဟ်နှင့်ဆက်စပ်သော၊ စတုရန်းသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။ ထိုမွေးကင်းစဂြိုဟ်သည်နေ၊ လ၊ အတက်ကြွ၊ မာကျူရီ၊ ဗီးနပ်စ်သို့မဟုတ်အင်္ဂါဂြိုဟ်ဖြစ်သည့်အခါသက်ရောက်မှုသည်ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ် မူတည်၍ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ Saturn, Uranus, Neptune နှင့် Pluto တို့နှင့်အဆက်အသွယ်များသည်ကြာရှည်စွာခံစားခဲ့ရသည်။